Farmashiyeyaasha & Waxyaabaha Lagu daro Qurxinta iyo Warshadaha - Shiinaha Soosaarayaasha & Cosmetic Add-Soo-saareyaasha
Glycine CAS 56-40-6 ee Fasalka Pharma (USP / EP / BP)
Magaca Badeecada ly Glycine
CAS MAYA .: 56-40-6
Muuqaalka powder Budada kareemka cad
Wax soo saarka alaabta: Dhadhan macaan, oo si fudud biyaha ugu milmi kara, waxyarna ku milmi kara methanol iyo ethanol, oo aan lagu dhex milmi karin acetone iyo ether, barta dhalaalaysa: inta u dhexeysa 232-236 ℃ (kala daadsanaanta).
L-Lysine HCL CAS 657-27-2 ee Fasalka Pharma (USP)
Magaca Badeecada ： L-Lysine HCL
CAS MAYA .: 657-27-2
Astaamaha alaabta: Maaddada muraayad aan midab lahayn, ur lahayn, macaan qadhaadh; ku milmi kara biyaha, xoogaa ku milmi kara ethanol iyo etherhyl ether
Magaca Badeecada ： L-Threonine
CAS MAYA .: 72-19-5
Wax soo saarka alaabta: Udgoon, waxyar oo macaan, dhalaalay oo ku daatay qiyaastii 256 ℃, si dhakhso leh ayuu u jajabay markii uu la kulmayo alkali khafiif ah heerkulka sare iyo gaabis markii aad la kulantid asiidhyo, biyo ku milma, oo aan ku milmi karin ethanol, ether iyo chloroform.
L-Isoleucine CAS 73-32-5 ee Fasalka Pharma (USP / EP)
Magaca Badeecada ： L-Isoleucine
CAS MAYA .: 73-32-5
Wax soo saarka alaabta: dhadhanka qadhaadh, ku milma biyaha waxyarna ku milma aalkolada ethyl, barta dhalaalaysa: 284 ℃.
L-valine CAS 72-18-4 ee Fasalka Farmashiyaha (USP)
L-Phenylalanine CAS 63-91-2 ee Fasalka Pharma (USP)
Magaca Badeecada ： L-Phenylalanine
CAS MAYA .: 63-91-2
Muuqaal ： caddaan iyo caddaan-cad-cad budada dhalada ah
Wax soo saarka alaabta: ur yar oo qaas ah iyo qadhaadh. Ku fadhiiso kuleylka, iftiinka iyo hawada
L-Methionine CAS 63-68-3 ee Fasalka Pharma (USP)
Magaca Badeecada ： L-Methionine
CAS MAYA .: 63-68-3
Muuqaalka Cry Kiristaalo Caddaan ah ama Budada Crystalline
Waxyaabaha alaabta: Xoogaa ur gaar ah, dhadhan yar oo dhadhan ah. Barta dhalaalida: 280 ~ 281 ℃. Degganaan la'aanta asiidhyada adag. Ku milmi kara biyaha, diirimaad ethanol diirran, xalka alkaline, ama milix aashitada macdanta. Ku milmi kara ethanol, ku dhowaad aan lagu milmin ether.
L-Leucine CAS 61-90-5 ee Fasalka Pharma (USP)
Magaca Badeecada ： L-Leucine
CAS MAYA .: 61-90-5
Wax soo saarka alaabta: Dhadhamiya waxoogaa qadhaadh ah, biyo ku milma, Xoogaa ku milma khamriga, aan ku milmin ether.
DL-Methionine CAS 59-51-8 ee Fasalka Pharma (USP / EP)
Magaca Badeecada ： DL-Methionine
CAS MAYA .: 59-51-8
Muuqaalka powder budada kareem cad
Guryaha Wax Soo Saarka: Barta dhalaalaysa ee 276-279 ℃, Biyaha ku milma, Aad u adag in lagu milmo ethanol, Ku dhowaad aan lagu milmin acetone ethanol.
73-32-5 L-Isoleucine, L-Valine 72-18-4, Nafaqada xoolaha, Fasalka L-Threonine Pharm, Fasalka Farmashiyaha L-Leucine, Fasalka Cuntada L-Threonine,